विज्ञान/प्रविधी :: NepalPlus
चन्द्रमा चिनको पोल्टामा ?
अक्टोबर २९, २०११
अमेरिकी बैज्ञानिकहरु चन्द्रमा पुगेर फर्किएको धेरै भएको त छैन नै, तर अब भने त्यहि चन्द्रमा छुनपनि चिनको ईजाजत लिनुपर्ने दिन आउन सक्छ । यस्तो भन्नेपनि अमेरिकी विशेषज्ञ नै हुन् । चानचुने ब्यक्ति होइनन् फेरी । भूउपग्रह, ग्रह...
मिल्किएको प्लास्टिकबाट बन्ने भो गाडीको डिजेल
जुन २७, २०११
● अमेरिकिहरुले वार्षिक निस्कने ४८० खर्ब टन प्लास्टिक मध्ये जम्मा सात प्रतिशत रिसाइकल गर्छन् ● हरेक एक टन मिश्रित प्लास्टिकबाट अब २०० ग्यालिन डिजेल निकाल्न सकिन्छ प्लास्टिककाका झोला, बीयरका क्यान र पोका पन्तुरा बनाउने अन्य प्लास्टिकका वस्तु...
निराश मानिस बस्ने घरका पाल्तु जनावरपनि रोगी
मे १३, २०११
निरोगी रहेर धेरै बाँच्न मन कसलाई हुन्न है ? हरेकलाई हुन्छ । बैज्ञानिकहरुले त्यसरि बाँच्न सकिने केहि आधार र अक्किलहरु सुझाएका छन् । त्यसको लागि कुनै कष्ट पर्दैन । झन मज्जा हुन्छ । रमाइलो लाग्छ । खर्चिलो...
स्पेनकी महिलाको दाबी : सूर्य मेरो
फ्रेब्रवरी १, २०११
बाटो, बिजुली, पार्किङ, खर्च, आम्दानी, खाना, उपचार, शिक्षा, टिभी, रेडियो सारामा कर तिर्दातिर्दा फ्रान्सेलीहरुबिच एउटा भनाई अति लोकप्रिय छ- अब कुन दिन सरकारले स्वास फेरेको’नी कर लिने हो । तर साँच्चिकै यस्तो समय आयो, स्वास फेरेको त...
विश्वकै सर्वोच्च उचाइको प्रयोगशाला नेपालमा
डिसेम्बर २०, २०१०
हिमाली अनुसन्धानकालागि विश्वमै प्रख्यात ● लक्ष्मण अधिकारी / सोलुखुम्बु (तस्विर पनि) विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखैमा रहको पिरामिड प्रयोगशाला विश्वकै सबैभन्दा उच्च क्षेत्र (High Altitude) मा रहेको विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र हो । समुदि् सतहबाट...
उच्च रक्तचाप छ ? खानुस तर्बुजा
नोभेम्बर १४, २०१०
हपक्क गर्मीले छोपेर खलखली पसिना आउँदा तर्बुजाको याद निकै आउँछ । शरीर सित्तल बनाउँछ नै तर्बुजाले । त्यसैकालागि चिनिएको हो त्यो । तर वैज्ञानिकहरूले गज्जबको शक्ति फेला पारेका छन् तर्बुजामा । अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार...
मोटी हुनुहुन्छ ? घट्ने भो स्मरणशक्ति !
अगस्ट ६, २०१०
मोटी महिला देख्दा पहिले पहिले खाइलाग्दो, स्वस्थ ठानिन्थ्यो । ड्याम्मको खाइ लाग्दो छ शरीर। ह्रिस्टपुस्ट छे । पातलो शरिर देखेपछि खाने बेलामा लखेटे जस्तो भन्नेहरु अझैपनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । भारतका कतिपय ठाउँमा अझैपनि भुँडी लागेको, मोटो शरीर भएकालाई सम्पन्न,...
छोरी पाउन मरिहत्ते
फ्रेब्रवरी २१, २०१०
नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा त छोरा पाउन मरिहत्ते गर्छन् नै । जतिसुकै बिकसित भनेपनि पश्चिमी मुलुकमा समेत अहिलेसम्म छोरा पाउन चाख राख्नेको संख्यानै तुलनात्मक रुपमा बढि छ । तर थुप्रै चराका जाती भने...
चन्द्रमामा घर बनाइने !
नोभेम्बर २६, २००९
हामी पो दिनभरी मारमुंग्री, कुटाकुट र लखेटा लखेट्मा ब्यस्त छौं त । अनि भएका बाटाघाटा, सडक भत्काउन र बाटाका बत्ती फ़ुटाउनै हतारो छ । अरु देशका मानिस भने जल र थलमा पनि नपुगेर, प्रिथ्वीमा पनि निकै सकेर...
यस्तो पो रैछ प्रिथ्वीको पहिलो तस्बिर ?
डिसेम्बर २४, २००८
आजकै दिन पुगेका थिए चन्द्रमामा मानव । १९६८ डिसेम्बर २४ का दिन । तर ति चन्द्रमामा पुगेको भन्दापनि तिनले छोडेको मानव पाईला र आक्रितिलाई बढि संझने गरिन्छ । अथवा तिनले खिचेको प्रिथ्वीको तस्बिर । त्यहि बेलादेखि हो...